By bryanekobe Last nohavaozina Oct 13, 2020
Tsy mora ny mahafantatra rehefa misy olona manadala anao. Mba hisorohana ny fanaovana sarimihetsika dia ireto misy famantarana 3 manamarina fa misy olona milalao aminao araka ny siansa!
O ry fitiavana! Tena mety hahatonga antsika tsy hanana saina. Na izany aza, tsy mora ny mahafantatra raha mahatsapa ny fifandraisana mitovy amin'ny antsika amintsika ilay olona mifanohitra aminy. Satria, rehefa manomboka ny fifandraisana dia sarotra be ny manisy tampoka an'io karazana lohahevitra io tampoka, mandany fotoana tsy manam-petra isika amin'ny fandikana ny fihetsika kely indrindra. Ary raha azonao itokisana ireto famantarana 4 ireto hahafantaranao raha misy zavatra hitranga amin'ny daty hampiarahanao dia nanapa-kevitra ny siansa fa hanome anay tanana fanampiana amin'ny fanaovana fandalinana lalina tokoa. Eny tokoa, tao amin'ny Oniversiten'i Kansas, manam-pahaizana maro no liana tamin'ny fomba fahitan'ny lehilahy ny fihetsiky ny tarehy.. Ary misy famantarana telo izay mahatonga ny olona iray hafa hahatsapa ho milomano miaraka aminy avy hatrany.
Bola: Bruce Mars via Pexels
Raha ny filazan'ny Elite Daily, mba hahombiazana amin'ny famaritana azy ireo, dia nodinihin'izy ireo ny fomba filalaovana vehivavy amin'ny lehilahy amin'ny vondrona maro samihafa. Rehefa avy nanao fanadihadiana 6 nifanindran-dàlana izy ireo dia afaka nanazava ny fahitan'ny lehilahy ny filalaovana fitia. Raha efa fantatrao angamba fa ny fomba fiasa sasany dia mety hidika hoe misy olona manadala anao, ity no fotoana voalohany nahafahan'ny siansa nanamafy an'io teoria io. Ampy izay ny milaza fa zavatra revolisionera io. Ka inona avy ireo famantarana malaza ireo?
Voalohany, raha manodina ny lohany amin'ny ilany iray ny daty mampiasanao azy ary manongilana kely azy dia efa azonao atao ny milaza amin'ny tenanao fa mandeha tsara ny raharaha. Avy eo izy dia hanana tsiky kely eo amin'ny molony. Tsy ho goavana izany, fa ampy anao ny mametraka fanontaniana amin'ny tenanao. Farany, hijery anao amin'ny masonao izy. Famantarana tsy mamitaka! Toy ny inona, azo atao izao ny mahalala hoe misy olona milalao aminao. Aza adino ny mandray naoty, mety ho mora amin'ny daty manaraka. Ankoatr'izay, nanolotra anao i Trendy hahita ny fitsipika 8 amin'ny daty voalohany vanona.
Ny pastera David Aimé dia te hanangana an'i Dj Arafat - Video